6 Sababood oo lagu bilaabayo Barnaamijka Suuqgeynta Xiriirinta Ganacsigaaga Yar (Sida Loo Sameeyo) | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/6 Sababood oo lagu bilaabayo Barnaamijka Suuqgeynta Xiriirinta ee Ganacsigaaga Yar (Sida loo Sameeyo)
6 Sababood oo lagu bilaabayo Barnaamijka Suuqgeynta Xiriirinta ee Ganacsigaaga Yar (Sida loo Sameeyo)
Waxaa jira fursado badan oo ay heli karaan ganacsiyada yaryar si ay u suuq geeyaan alaabtooda iyo adeegyadooda. Sideed u go'aamin kartaa kuwa ugu faa'iidada badan?
Badanaa, jawaabtu waxay tahay in xeelado badan oo suuqgeyneed oo kala duwan loo isticmaalo iyadoo lala kaashanayo midba midka kale ayaa ah xalka ugu fiican ee lagu kordhinayo waqtiga iyo kheyraadka iyo kordhinta faa'iidada. Xeeladahan waxaa ku jiri kara iimaylka, warbaahinta bulshada, SEO, PPC, iyo in ka badan.
Waxay u badan tahay inaad maqashay xeeladahan iyo faa'iidooyinkooda, laakiin waxaa jirta xeelad kale oo kaa caawin karta inaad iska ilaaliso kharashyada hore oo aad hoos u dhigto khatarta adigoo kordhinaya iibka: suuqgeynta xiriirka. Weligaa ma u tixgelisay tan inay qayb ka tahay arsenal suuqgeyneed? Haddii kale, waxa laga yaabaa inaad lacag badan kaga tagayso miiska.
Maqaalkan, waxaanu ku dabooli doonaa:
Waa maxay suuqgeynta xiriirka la leh.
Faa'iidooyinka suuqgeynta xiriirka la leh ganacsiyada yaryar.
Sida loo sameeyo barnaamij ku xidhan ganacsigaaga yar.
Talooyin ku saabsan helidda xiriiriye
Waa maxay suuq geynta xidhiidhka la leh?
Marka shirkad ama shakhsi ay kor u qaadaan wax soo saarka qof kale, waxay ka qaybqaadanayaan suuq-geynta xiriirka la leh. Suuqgeynta affiliate waxay ujeedadeedu tahay soo saarista dakhliga iyada oo horumarinaysa alaabada iyo adeegyada dhinac saddexaad.
Haddii macaamilku wax ku iibsado isku xirka xiriirka la leh, xiriirku wuxuu kasbaday komishanka. Xiriiriyayaashu waxay la mid yihiin dadka wax iibinaya ee shirkadda ay wax soo saarkeeda kor u qaadaan.
Qaabka xiriirku wuxuu ku salaysan yahay wadaaga dakhliga. Ganacsi yar ahaan, waxaad dadka kale u soo bandhigtaa dhiirigelin dhaqaale si ay kuu horumariyaan oo ay kuu iibiyaan.
Suuqgeynta affiliate waa qaab suuqgeyn ku saleysan wax qabad kaasoo si weyn ugu guuleystey moodooyinka ganacsiga SaaS, adeegyada ku saleysan is-diiwaangelinta, iyo qeybta dib u eegista badeecada. Warshadaha kala duwan, waa hab aan khatar lahayn oo lagu wanaajiyo taraafikada, loo kordhiyo wacyiga summada, iyo abuurista iibka badan.
Mashaariicda Statista in 2022, shirkaduhu waxay ku bixin doonaan $8.2 bilyan suuqgeynta xiriirka la leh. Diyaar ma u tahay inaad ka faa'iidaysato warshadahan bilyan doollar ah?
Waa maxay faa'iidooyinka suuq-geynta xiriirka la leh ganacsiyada yaryar?
Ganacsiyada yaryar waxay inta badan leeyihiin agab iyo miisaaniyad xaddidan. Mararka qaarkood xitaa ma haystaan ​​koox suuqgeyneed oo u go'an si ay u horumariyaan ganacsigooda. Suuqgeynta affiliate waxay bixisaa hab wax ku ool ah oo wax ku ool ah si loogu kaxeeyo taraafikada ganacsigaaga oo loo kordhiyo faa'iidada. Si kastaba ha noqotee, iyada oo lahaanshaha shabakad suuqgeyneed oo heersare ah ay faa'iido weyn u tahay ganacsiyada yaryar, waxaad weli u baahan tahay inaad doorato cidda aad dooranayso.
Halkii aad qof walba ku aqbali lahayd barnaamijkaaga, waxa fiican in la sameeyo hannaan baadhiseed. Si la mid ah istiraatiijiyadda suuqgeynta ecommerce ee suuqgeynta ecommerce ay u saameyso muuqaalka astaantaada, kuwa ku xiran waxay sidoo kale saameyn ku yeeshaan astaantaada iyo sumcaddaada.
Si la mid ah xeeladaha mashiinka raadinta ee loo isticmaalo ganacsiga ecommerce, suuqgeynta xiriirka ayaa kaa caawin doona kordhinta soo-gaadhista alaabtaada iyo kordhinta iibka. Halkan waxaa ah warbixin kooban oo ku saabsan faa'iidooyinkeeda:
1. Kobcinta wacyiga sumadda
Hadafka internetka ee ganacsi kasta waa in si fudud loo aqoonsado iibsadayaal badan oo suurtagal ah intii suurtagal ah. Marka ay xidhiidhiyayaashu wadaan taraafikada shabakadaada, waxay kordhiyaan ka warqabka summadaada iyo gaadhisteeda. Sababtoo ah kuwa raacsan waxay kasbadaan qayb ka mid ah dakhligaaga, waxay leeyihiin dano gaar ah guushaada, waa u doodeyaal daacad ah, oo gacan ka geysta dhisida kalsoonida macaamiisha mustaqbalka.
2. Kor u qaadida caddaynta bulshada
Macaamiisha maanta waa xog badan waxayna leeyihiin rajooyin ka sarreeya sidii hore. Waxay si weyn ugu tiirsan yihiin caddaynta bulshada ee sumcadda summada. Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, ku dhawaad ​​95% macaamiisha ayaa akhriya dib u eegista online ka hor inta aysan go'aansanin inay wax iibsadaan. Marka shirkadu ay dhisto xidhiidh ay la yeelato dhagaystayaal ku hawlan oo iyaga aamina, badeecadooda ku xidhan ama dib u eegista adeeg ayaa siisa cadaymo bulsheed oo lagu kalsoonaan karo iibsadayaasha mustaqbalka leh.
3. Gaadhi dhegaystayaal la beegsanayo oo ballaadhan
Ganacsiyada yaryari waxay geli karaan dhageystayaasha xiriirkooda, natiijaduna, waxay balaadhiyaan gaadhista summadahooda. Dhegaystayaashan cusub waxa laga yaabaa inaanay fududayn in la beegsado oo la garto iyadoo la isticmaalayo hababka kale ee suuqgeyn iyo xayaysiis. Markaad doorato kuwa raacsan ee ku qanca astaantaada, waxaad hubisaa in taraafikada aad ka hesho isku xirka xiriiriyaha la bartilmaameedsan doono kuwa u arka alaabtaada ama adeegyadaada inay faa'iido u leeyihiin.
4. Hagaajinta heerarka beddelka
Awoodda la socodka sida ganacsigaagu u shaqeeyo waxay awood kuu siinaysaa inaad horumar shaqo ku samayso mustaqbalka. Markay xogta ka soo ururiyaan suuqgeynta xiriirka la leh, shirkaduhu waxay heli karaan fikrado muhiim ah oo ku saabsan halka ay macaamiishooda ka yimaadeen iyo sababta ay wax u iibsanayaan.
Barashada iyo falanqaynta ururinta qani ah ee xogta waxay caawisaa shirkadaha inay horumariyaan beddelaadkooda iyagoo isbedel ku samaynaya shabakadooda, iyagoo siinaya hal-abuuro muuqaal oo badan oo soo jiidasho leh, iyo aqoonsashada kuwa xidhiidhiya ee keena dakhliga ugu badan.
5. Lacag dhig
Marka la barbar dhigo kharashyada xayaysiisyada ama dadaallada kale ee suuqgeyneed, suuqgeyntu waa mid aad u qiimo badan. Sababtoo ah waxay ku salaysan tahay wax qabad, la-hawlgalayaasha waxa kaliya ee la bixiyaa marka ay abuuraan iib. Ganacsiyadu waxay hore u dejiyeen qaab dhismeedka komishanka waxayna iska ilaaliyaan inay lacag ku lumiyaan ololeyaasha xayaysiisyada ee aan waxtarka lahayn.
6. Kasbashada maalgashi sare oo soo celin ah (ROI)
Inta badan ololaha suuq-geynta iyo xayaysiinta, go'aaminta ROI waxay noqon kartaa mid adag iyo ciyaar sugitaan oo aan la saadaalin karin. Qaabka wax-qabadka ku salaysan ee suuq-geynta xiriirka waxa loo dhisay faa'iidada. Ganacsiyadu kuma bixinayaan iibsadayaasha iman kara aragtiyo ama dhagsiin, kaliya iibka xidhan.
Tani waa mid ka mid ah sababaha aasaasiga ah ee ganacsiyada yaryar ay doortaan inay ka faa'iidaystaan ​​​​xubnaha si ay u horumariyaan oo ay u iibiyaan alaabadooda ama adeegyadooda. Markaad u gudbiso dadaalkaaga xayaysiis ee barnaamijka xiriirka la leh, waxaad heleysaa saameyn iyo galaangal toos ah oo ku saabsan dhageystayaasha aadka loo beegsaday oo ay u badan tahay inay wax ka iibsadaan shirkaddaada.
Sida loo sameeyo barnaamij ku xidhan ganacsigaaga yar
Kahor intaadan bilaabin, hubi inaad fahantay Guddiga Ganacsiga Federaalka (FTC) tilmaamaha ku saabsan muujinta cilaaqaadka xiriirka la leh. Hana u qaadan in haddii aad u abuurto barnaamij xidhiidh la leh ganacsigaaga yar, kuwa xidhiidhiya ayaa si toos ah ugu biiri doona.
Marka hore, kuwa ku xidhan kara waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in barnaamijkaagu jiro. Si la mid ah sida muhiimka ah ayaa ah siinta dhiirigelinta qof doonaya inuu noqdo xiriir oo uu horumariyo alaabtaada ama adeegyadaada. Tusaale ahaan, Amazon, barnaamijka xiriirinta ugu caansan, wuxuu bixiyaa faa'iidooyin iyo faa'iidooyin badan marka loo eego tartamayaasha.
Badeecooyinka baaxadda leh ee uu Amazon ka iibsan karo waa mid aan laga adkaan karin. Way fududahay in la noqdo xiriiriye, loomana baahna in la noqdo horumariye ama naqshadeeye shabakad si loo isticmaalo agabka ay bixiyaan. Qofna ma filan karo inuu la tartamo barnaamijka xiriirka la leh Amazon, laakiin waa tusaale aad u wanaagsan in la raaco marka la dejinayo kaaga.
Hoos waxaa ah tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah samaynta barnaamij suuqgeyneed oo waxtar leh oo guuleysta ganacsigaaga yar.
1. Go'aamiso yoolalkaaga
Sida aad ku samayn lahayd dhammaan hindisayaasha suuq-geynta, go'aami waxa ay yihiin yoolalkaaga guud, oo ay ku jiraan:
Noocyada macaamiisha aad rabto inaad ku keento barnaamijkaaga.
Waa maxay noocyada xiriirka aad rabto in aad horumariso oo aad iibiso alaabtaada ama adeegyadaada?
Si aad gacan uga geysato go'aaminta heerka guusha barnaamijka xiriirintaada, waa inaad sidoo kale deji yoolal la qiyaasi karo, sida:
Intee in le'eg oo dakhli ah oo aad rabto in la-hawlgalayaasha ay keenaan bishii, rubuc, ama sannad.
Sicirka beddelka xiriirinta xiriirinta ayaa gujisyada u horseeda iib.
Ugu dambayntii, qaddarka dakhliga laga keeno hay'adaha xidhiidhka la leh ayaa ah waxa muhiimka ah. Si kastaba ha ahaatee, dejinta yoolalka iyo cabbirada la cabbiri karo ayaa kaa caawin doona inaad garatid meelaha ku wanaagsan barnaamijkaaga iyo meelaha uu ku liito oo aad sameyso isbeddel ku habboon.
2. Fiiri tartankaaga
Kahor intaadan sameynin kuwaaga, falanqee meelaha ku wanaagsan iyo meelaha ay ku liidato ee barnaamijyada xiriirka la leh tartamayaashaada. Si aad u ogaato haddii shirkadaha kale ee ku jira niche-kaaga ay isticmaalayaan barnaamijyada ku xidhan, waxaad ka raadin kartaa Google:
[magaca tartanka] suuqgeynta xiriirka la leh
[magaca tartanka] xidhiidhiyayaal
[Tartanka magaca] barnaamijka xiriirka
Ama waxaad ka raadin kartaa kanaalada warbaahinta bulshada adoo isticmaalaya hashtag khuseeya si aad u hesho isticmaalayaasha saamaynta leh.
U fiirso muuqaaladooda si aad u aragto haddii ay kor u qaadayaan mid ka mid ah tartamayaashaada suuqgeyn xiriir la leh.
Ma aha oo kaliya inaad ganacsi u tartamayso dhagaystayaasha bartilmaameedka ah, laakiin sidoo kale waxaad u tartamaysaa kuwa ugu guulaha badan.
Raadi hal ama laba barnaamajyada ku xidhan ee tartamayaasha oo cadee:
Sida ay u qaabeeyaan guddiyada xiriirka la leh.
Xiriiriyayaashu miyay kasbadaan qaddar go'an ama boqolkiiba iibka?
Xiriirada ma lagu bixiyaa credits dhanka alaabta summada ama lacag caddaan ah?
Komishanku ma u muuqdaa mid hooseeya ama sarreeya marka loo eego qiimaha alaabta ama adeegga?
Xiriiriyayaasha ma lagu shaqaaleysiiyay shabakad xiriirsan mise iskood?
Sidee u adag tahay habka codsigu?
Eeg shuruudaha iyo shuruudaha la bixiyo.
Waa maxay shuruudaha iyo qawaaniinta qeexaya sida xulafadu u horumarin karaan xiriirkooda?
Ma jiraan wax xaddidaad ah oo ku saabsan waxa iyo sida ay xiriiriyayaashu u horumarin karaan badeecadaha iyo adeegyada?
Sidee loo tababaraa xiriiriyayaasha?
Waa maxay noocyada summadaha iyo agabka xayaysiinta ee la siiyo kuwa raacsan?
Qaabkee iyo immisa jeer ayuu tartamahaagu ula xidhiidhaa la-hawlgalayaasheeda?
Sidee loola raadraacaa cookies-ka iibka, iyo intee in le'eg ayay ku sii jirayaan firfircoonida xaaladahaas marka macaamiilku aanu wax gadan isku xidhka ugu horreeya?
Waa maxay waxyaabaha ku wanaagsan iyo meelaha ay ku liidato ee barnaamijyada xidhiidhka la leh tartamayaashaada?
Ka dib markaad falanqeyso wax kasta oo aad ka heli karto barnaamijyada xiriirka la leh tartamayaashaada, miyaad aragtaa fursad aad ku bixiso wax qiimo leh ama waxtar leh oo ay seegeen?
3. Aqoonso qaabka komishankaaga
Markaad go'aansanayso sida aad u bixinayso asxaabtaada, maskaxda ku hay waxaad ka baratay falanqayntaada tartanka oo ka dhig qaabkaaga mid soo jiidasho leh. Ma bixin doontaa credit-ka dukaanka ama lacag caddaan ah? Boqolkii intee le'eg ee qiimaha alaabta ama adeegga ayaad siin doontaa kuwa raacsan?
In kastoo aad rabto in aad sii ahaato mid tartame ah, waa in aad ku xisaabtanto baahiyahaaga. Waa maxay qiimaha iibka macmiilkaagu, celceliska qiimaha nolosha macmiilka, iyo heerka haynta? Tixgeli inaad siisid gunnooyinka asxaabtaada sare ee la kulma ujeedooyinka hore loo sii qeexay si barnaamijkaaga uga dhigo mid soo jiidasho leh.
4. Dooro shabakadaada
Ma abuuri doontaa barnaamij adiga kuu gaar ah ama ma isticmaali doontaa shabakad xiriir la leh oo jirta? Haddii aad haysato wakhti iyo agab aad si buuxda u maamusho barnaamijka xidhiidhka la leh, ma jiraan wax khalad ah inaad adigu dhisto.
Laakiin badi ganacsiyada yaryar waxay inta badan ku adag tahay inay abuuraan barnaamijkooda. Nasiib wanaag, waxaa jira habab suuqgeyneed badan oo xiriir la leh halkaas oo aad ku xayeysiin karto alaabtaada iyo adeegyadaada lacag.
Shabakadaha xidhiidhka la leh waa sida dhexdhexaadiye ama maamulaha mashruuca ee barnaamijkaaga xidhiidhsan. Waxay ku maareeyaan barnaamijkaaga iyagoo siinaya adeegyo, sida shaqaaleysiinta, kala soocida, la socodka iibka, iyo lacag bixinta komishanka.
Hoos waxaa ah dhowr ka mid ah aaladaha shabakadaha xiriirka la leh ee caanka ah.
LeadDyno waxay siisaa milkiilayaasha ganacsiga yaryar madal ay ku bilaabaan oo ay ku maamulaan barnaamijyadooda xiriirka la leh.
Maamulka lacag bixinta guddiga
iimaylo toos ah
Suuq-geynta warbaahinta bulshada
Isgoyska Guddiga (CJ) waa shabakad suuqgeyneed oo weyn, adag, oo la miisaami karo
Iyada oo la adeegsanayo xogta, hal-abuurka, iyo xalalka omnichannel, CJ waxay ka caawisaa asxaabtaada inay wadaan wax kala beddelasho badan iyagoo horumarinaya badeecadaada iyo adeegyadaada.
ShareASale waa mid ka mid ah kuwa waaweyn oo aad loo yaqaan ee suuq-geynta xiriirka la leh.
Teknoolojiyadda hal-abuurka leh ee ShareASale waxay ku siinaysaa aragtiyo ku saabsan dhaqdhaqaaqa ku xidhan iyo xogta waxqabadka si loo kordhiyo dakhliga ganacsigaaga.
Sida loo helo xidhiidhiyayaal meheraddaada yar yar
Xitaa haddii aad doorato shabakad suuq-geyneed xiriir la leh, macnaheedu maaha inaadan keligaa heli karin xidhiidho kale oo aqoon leh. Dhammaan waxay ku saabsan tahay dhisidda xiriirka. Xiriiriyayaashu waxay rabaan oo kaliya inay horumariyaan badeecadaha iyo adeegyada sumadaha ay ku kalsoon yihiin. Midda kale, magacoodii iyo sumcaddii bay xayndaabka gelinayaan.
Marka la kala saarayo xubnaha suurtogalka ah, tixgeli arrimaha soo socda:
Miyay hore u lahaayeen madal, sida blog ama degel internet, oo leh waxyaabo tayo leh?
Sax ma yihiin marka ay la xidhiidhaan dhagaystayaashooda onlayn?
Ma fanka bandhiga ayay si fiican u yaqaaniin oo ma sheegaan, taasoo la macno ah inay yihiin sheeko-yaqaanno waaweyn oo soo jiidan doona macaamiisha oo ku qanciya inay iibsadaan?
Intee in le'eg ayaa taraafikada uu soo saaraa blog-kooda ama shabakadooda? Inta badan taraafikada, ayaa sare u kacaysa suurtagalnimada iibka.
Joogitaankooda khadka tooska ah ma yahay mid xirfad leh, oo miyay la jaan qaadayaan booska astaantaada?
Ma leeyihiin shabakad bulsheed oo weyn ama ku hawlan oo daba socota?
Heerarka xiriirku ma sarreeyaa shuruudaha raadinta ee la xidhiidha alaabtaada ama adeegyadaada?
Isagoo ka hadlaya joogitaanka khadka tooska ah, intee buu xoog badan yahay taadu? Ku ogow 90 ilbiriqsi gudahood LoCALiQ Grader-ka bilaashka ah!
Kahor intaadan aqbalin xubin ka mid ah barnaamijkaaga, qiimee tayada qoraalka iyo muuqaalka ay ku dhejiyaan shabakadooda ama balooggooda. Waxa kale oo aad doonaysaa inaad hubiso inay isticmaalayaan martigelin la isku halayn karo oo leh wakhtiyo xawli ah oo rarida gaadiidka
U fiirso tirada taageerayaasha bulsheed, waxa ay soo dhejiyaan, iyo qadarka hawlgelinta ee ay helaan. Markaad qorto xiriiriyayaal aqoon leh, sii agab xayaysiis ah, sida hantida hal-abuurka leh iyo boodhadhka, si loogu daro balooggooda ama mareegaha internetka. Tani waxay sidoo kale ku siin doontaa koontarool badan oo ku saabsan fariinta astaantaada.
Isticmaalka Amazon tusaale ahaan mar labaad, waxay si cad u sharxaan oo ay fududeeyaan in ay abuuraan qoraalo xiriiriye ah oo la isku habeeyay iyo isku xirka sawirka iyo boorarka garaafyada casriga ah.
Ku soo koob asxaabtaada shuruudaha iyo shuruudaha barnaamijka oo ha saxeexaan heshiis inay u hoggaansami doonaan xeerarkaaga.
Ku tababar aasaaska astaantaada, ka jawaab su'aalaha ay qabaan, sii xiriirkooda, oo qorshee inaad si joogto ah u hubiso horumarkooda.
Diyaar ma u tahay inaad bilowdo u adeegsiga suuq-geynta xiriirka ganacsigaaga yar?
Sida wax kasta oo kale oo nolosha ah, waxaa jira faa'iidooyin iyo khasaarooyin si loo hirgeliyo barnaamijka xiriirka la leh. Si kastaba ha ahaatee, adduunka dhijitaalka ah ayaa u dhaqaaqaya qaab wax-soo-saare ah halkaas oo ganacsiyadu ay si wax ku ool ah u gaari karaan dhagaystayaal badan, abuuraan shuraakooyin kuwa raacsan, oo ay kordhiyaan dakhligooda.
Sida kharashka xayaysiisku kor u kaco, barnaamijyada ku xidhani waxay bixiyaan hab awood leh oo lagu gaadho macaamiisha suurtagalka ah qayb yar oo ka mid ah qiimaha.
Aan ku dhammeyno qodobbada muhiimka ah ee laga qaadanayo hagaha suuqgeynta xiriirka la leh ee ganacsiyada yaryar:
Suuqgeynta affiliate waxay kordhin kartaa taraafikada boggaaga, kor u qaadida wacyiga sumadda, kor u qaadida caddaynta bulshada, ballaarinta gaadhistaada, waxay dhalisaa ROI sare.
Si aad u dejiso barnaamij ku xidhan, go'aami yoolalkaaga, xaddid tartankaaga, go'aami qaab dhismeedka komishanka, dooro shabakadaada iyo goobtaada, oo raad raac xogtaada.
Si aad u heshid kuwa raacsan, ku xisaabtan arrimo ay ka mid yihiin tayada xogtooda, runnimada xiriirkooda, iyo xoogga joogitaankooda onlaynka ah.
Julie Weishaar waa Khabiirka Suuqgeynta Dijital ah ee Visual Digital kaasoo aasaasay Horizons New 123. Waxay ka shaqeysaa inay ka caawiso ganacsiyada yaryar inay kordhiyaan muuqaalkooda internetka oo ay koraan iyadoo ka faa'iidaysanaysa tignoolajiyada ugu dambeeyay ee internetka iyo fiidiyowga. Julie waxay ku takhasustay wax soo saarka fiidiyooga ee kaamirada yar ee hal-abuurka leh, muuqaalada gaarka ah, qoraalka nuxurka, iyo bandhigyada SlideShare. Waxay sidoo kale maamushaa HubSpot CRM, maamulka blog-ka, suuq-geynta iimaylka, suuq-geynta, iyo warbaahinta bulshada macaamiisheeda.
5 Apps ee Android ee Python Programming
Ku Kordhi Hababka Ugu Wanaagsan Kooxdaada 8-daan Aaladood ee Isgaadhsiinta Gudaha